FBC - Paartileen dhimma mariisituu waltajjii marii fi falmiirratti osoo walii hin galin adda ba’an
Paartileen dhimma mariisituu waltajjii marii fi falmiirratti osoo walii hin galin adda ba’an
Finfinnee, Bitootessa 9,2009(FBC) - Paartileen siyaasaa biyyoolessaa 22n dhimma mariisituu waltajjii marii fi falmii fulduratti gaggeeffamurratti osoo walii hin galin adda ba’an.
Paartileen kanneen har’a yammuu wal ga’an, kanaan booda marii fi mormiiwwan gaggeeffamanirratti qaamni mariisistuu 3ffaan haa jiraatumoo hin jiraatin kan jedhurratti murteessuf ture.
Marii har’aa kanaanis paartileen siyaasaa mormituu hundi, waltajjiin marii fi falmii kanaan boodaa qaama 3ffaan haa duurfamu yaada jedhu dhiyeessaniiru.
Paartiin biyya bulchaa jiru ADWUI ammoo waltajjichi dabareen yaa duurfamu; qaamni 3ffaan hin barbaachisu yaada jedhu kaasera.
Paartileen kanneenis yaada kanarratti marii sa’aa 6 kan gaggeessan yammuu ta’u, paartileen siyaasaa mormituunis marii fi falmiin qaama gaggeessituu malee gaggeeffamuu hin danda’u yaada jedhu dhiyeessaniiru.
Addi Warraaqsa Ummattoota Ityoophiyaa garuu mariisistuun waltajjicha gaggeessuun ala ga’ee waan hin qabaannef, qaamni 3ffaan hin barbaachisu jedheera.
Dhimmicharrattis waliigaluu dhabuu isaanitiinis, beellama Bitootessa 20,200tti qabataniiru.
Marii gaggeeffamerratti Tokkommaan Demokraatawa Federaalawa Ityoophiyaa Madrak, Adda Warraaqsa Ummattoota Ityoophiyaa waliin bakka bu’aa adda durummaan nan mari’adha jedhus paartileen kaan yaadasaa mormaniiru.
Dura taa’aan Madrak Proofeesar Bayyanaa Pheexroos ejjennoo paartiisaanii kophaa jijjiiruu hin danda’u waan jedhaniif, dhimmicharratti akka itti yaadan yaada paartileerraa kennameef nan fudha jedhaniiru.
Paartileen siyaasaa kanneen wixinee dambii adeemsa sirna marii fi mormiis ni raggaasisu jedhameet eegama.
Oduuwwan Biroo « Lammiilee naannoo balaaf saaxilamoo jiraatan duursanii balaarraa eeguuf ni hojjetama-Dooktar Nagarii	Mootummaan lammilee balfi itti diigamee miidhaa irra qaqqabsiise deebisanii of dandeessisuuf xiyyeeffannoo kennee nihojjata: Itti-aanaa Ministira Muummee Dammaqaa Mokonnin »